Indlela uYesu awabiza ngayo abafundi bakhe Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Indlela uYesu awayebabiza ngayo abafundi bakhe. Emva kokuxhathisa izilingo ezithathu kwintlango yakwaYuda, UYesu waqalisa ubomi bakhe esidlangalaleni. Waya eGalili apho waqala ukutyelela izixeko ezahlukahlukeneyo kunye needolophu efundisa umyalezo wakhe kwizindlu zesikhungu, ephilisa abagulayo kwaye evakalisa «Iindaba ezimnandi«.
Nangona kunjalo, ngaphambi kokuqala umsebenzi wakhe, waya kwiindonga zoMlambo iJordan apho UYohane uMbhaptizi Iyamamkela njengoMesiya ovakaliswe yiTestamente eNdala.
"Ngengomso uYohane wabona uYesu esiza kuye, wathi, Nantso iMvana kaThixo, ethwala isuse isono sehlabathi."
Ubhaptizo kunye namazwi kaYohane asebenza ukuqinisekisa u Yesu ngobufundisi awayeze ngabo emhlabeni: Fela ubuntu. Kulapho aqala khona uYesu ubulungiseleli bakhe, naxa wayeqala ukukhetha abafundi bakhe.
Ukwazi indlela akhethe ngayo nendlela uYesu awabiza ngayo abafundi bakhe, qhubeka ufunda eli nqaku.
1 Indlela uYesu wayebabiza ngayo abafundi bakhe: Abapostile abali-12
2 Indlela uYesu abakhetha ngayo abafundi bakhe
2.1 UAndrés noJuan
2.3 UFilipu noNataniyeli
2.4 USantiago noJuan
2.5 UMateyu, uTomas, uSimon, uYudas noYuda Sikariyoti
2.6 Indlela uYesu awayebabiza ngayo abafundi bakhe
Indlela uYesu wayebabiza ngayo abafundi bakhe: Abapostile abali-12
Igama le Abapostile abali-12 zikaYesu
Le yindlela uYesu awabiza ngayo abafundi bakhe:
USimon, awamthiya igama Pedro.
UAndrés, umntakwabo Pedro.
UJuan, umntakwabo Santiago.
Natanayeli, lowo wayebizwe nguYesu UBhartolomeyu.
Santiago, unyana ka-Alpheus.
UYudas, umntakwabo Santiago kunye nonyana ka-Alfeo.
USimon, abawabiza ngokuba ngamaZealot.
UYuda Sikariyoti, lowo wangcatsha uYesu.
Indlela uYesu abakhetha ngayo abafundi bakhe
Ngosuku olulandelayo emva kokubhaptizwa, uYohane uMbhaptizi waphinda la mazwi akhankanywe phambi kukaYesu: «Nantso iMvana kaThixo. Ngeli xesha, UAndrés noJuan BabeseMlanjeni iYordan, bakuva loo mazwi, baya apho uYesu wayeza kuhamba khona.
Xa uYesu wabona ukuba bayamlandela bobabini, wababuza: "Ufunantoni? Ingaba ufuna ntoni?«. Baphendule bathi: «Mfundisi, uhlala phi?». UYesu wathi kubo:"Yiza ubone".
UAndrés, eqinisekile ukuba umfumene "okhethiweyo", wabaleka waya kukhangela umntakwabo USimon, wathi: "Simfumene uMesiya."
USimon wayehamba nomntakwabo ukuya kudibana naloo mntu wayethetha naye umntakwabo ngophakanyiso olunje, wathi akumbona uYesu wathi: «UnguSimon unyana kaJuan, kodwa uya kubizwa ngokuba nguPedro (ilitye)»
Felipe y UNataniyeli
Ngemihla yokuvalelwa kukaYohane umbhaptizi, uYesu nabafundi bakhe badibana Felipe y UNataniyeli.
Felipe, eyayivela kummandla we IBhetesayida, kwanele kuye ukuba uYesu amxelele «Ndilandele»Ukuze amlandele kwangoko.
Emva koko UFelipe waya kufuna uNatanel, wathi: «Simfumene Lowo uMoses wabhala ngaye emthethweni nangabaprofeti; kuYesu, unyana kaYosefu waseNazarete ».
UNataniyeli Wayengakholelwa ekuqaleni kwaye wathi kuFilipu: «Ngaba ikho into elungileyo enokuvela eNazarete?«, Waphendula uFelipe wathi:« Yiza ubone ».
Xa uYesu wabona uNatanel evela, wathi kuye: "Nanku umSirayeli wokwenene ekungekho nkohliso kuye." Wothuka uNathanayeli wambuza: "Undazi njani?" Kwaye UYesu wathi kuye:Phambi kokuba uFelipe akubize, xa wawuphantsi komkhiwane, ndandikubona.
UNathanayeli wayengumntu inkosi ye ITestamente Endala kwaye ukuva amazwi kaYesu waqonda kwangoko ukuba UYesu wayengunyana kaThixo kwaye enguMesiya wokwenene. Uphendule wathi: «Nkosi, unguNyana kaThixo, unguKumkani wakwaSirayeli»
Emva kokubona indlela UFelipe kunye noNatanel waqala ukumlandela, uYesu wabuyela ku IGaliliya. Ngenye imini, ehamba elunxwemeni lwedike, wabona isikhephe esincinci apho amanye amadoda ayephosa iminatha yawo, kuba ayengabalobi. Kweso sikhephe kwakukho abazalwana ababini abamagama abo UPedro noAndrés esele sichazile ibali labo.
Kwesinye isikhephe, kwakukho amadoda amathathu awayengabalobi. La madoda ayenjalo Santiago y juan Baye basebenza notata wabo ogama linguZebhedi. UYesu wababiza wathi:"Nawe yiza nam, nibe ngabafundi bam". Bawushiya umkhombe, bamlandela uYesu.
Mateo, Tomás, USimon, uYudas noYuda Sikariyoti
Njengoko ixesha lihamba, uYesu walandisa inani labantu ababemlandela. Ngenxa yoko wagqiba khetha abantu abali-12 obathembayo eyayiza kuhamba naye kubulungiseleli bakhe. Ngale ndlela, wenyuka intaba kwaye wachitha ubusuku ethandaza kuyise. Uthe ke wakuba ufikile, wababizela kuye abafundi bakhe, wanyula baba lishumi elinababini, abo ekuthiwa ngabapostile.
Phakathi kwezi zikhankanywe ngasentla, naye wakhetha Mateo, Tomás, USimon, uYudas noYuda Sikariyoti. Ngale ndlela waligqiba inani labapostile ababeza kuhamba naye ukuya kubhengeza i Iindaba Ezilungileyo zeVangeli.
Aba ngabapostile abalishumi elinambini abanyulwe nguYesu ukuba bahambe naye ukuya kuvakalisa iindaba zikaYesu Iindaba Ezilungileyo zeVangeli.